" DIGITAL MARKETING PLATFORM IN MYANMAR "
Digital Marketing Platform in Myanmar. ...
လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ် လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့
Way of living Communication Social
လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုတာ ဘာလဲ?။ လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုတာ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့အခြားသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်နဲ့ ပြောဆိုပြုမှုလုပ်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုဆက်ဆံရေး ကောင်းတယ်ဆိုတာ စကားပြောကောင်း တာနဲ့တင်မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ရဲ့အပြုအမူကောင်းမွန်တာလည်း လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းတာပဲဖြစ် ပါတယ်။ လူတစ်ဦးဟာ လူမှုဆက်ဆံရေး ကောင်း တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကြားမှာ ထင်ရှားနေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုဆက် ဆံရေးဟာ အရေးကြီးသလို နူးညံဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ...
ပျော်ရွှင်စွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရင်း ဝင်ငွေတွေ တိုးပွားလာစေဖို့ လုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်များ
Workplace Knowledge Way of living
လူသားအများစုရဲ့စိတ်မှာငယ်စဉ်အခါတုန်းကကြိုးစားခဲ့မယ်၊တတ်သင့်သလောက်တဲ့ပညာတွေရှိတဲ့အခါ လုပ်ငန်း ခွင်ထဲမှာ ခိုင်မာတဲ့ရာထူးနေရာတစ်ခုနဲ့  လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီ ဆိုရင် ပျော်ရွှင်စရာအခြေအနေတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်လို့ ထင်မှတ် ကြပါတယ်။ဒါကအမှန်တရားတစ်ခုလားဆိုရင်တော့ မှားတယ်လို့ လည်းပြောလို့ မရပါဘူး။ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အခြေ အနေတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့ဆိုတာ လိုအပ်လာတဲ့အခြေအနေမှာ ငွေကြေးပြည့်စုံစွာရှိနေဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ငွေကြေး များပြားစွာရတိုင်း ပျော်ရွှင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ကိုင်နေရလားဆိုရင်တော့ မမှန်ဘူးလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင် ထဲမှာ ပျော်ရွှင်မှုရှိမှ ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် ပျော်ရွှင်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နိုင်စေဖို့ ဒီအချက်လေးတွေကို လုပ်ဆောင်ကြည့်ကြရအောင် …… ...
လူငယ်တွေအတွက် ဦးသန့်ပြောခဲ့တဲ့ စကား ငါးခွန်း
အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့သူတွေအကြောင်းဖော်ပြတာ နိုင်ငံရပ်ခြားကသူတွေအကြောင်းပဲ များခဲ့လို့ မြန်မာနိုင်ငံက ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုခံသူတစ်ဦး အကြောင်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီသူကတော့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ မှာ ဥရောပနိုင်ငံတွေက မဟုတ်ဘဲ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတာဝန်ကို ပထမဆုံး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ဦးသန့် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးသန့် ဟာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ တတိယမြောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်ပြီး ၁၉၆၁ ခုနှစ် ကနေ ၁၉၇၁ ခုနှစ်အထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့သူတွေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဟာ နောက်လူတွေအတွက်လေ့လာ မှတ် သားသင်ယူစရာတွေချည်းဖြစ်တာကြောင့် ဦးသန့်ရဲ့ပြောစကားတွေထဲက လူငယ်တွေအတွက်မှတ်သားသင့်တဲ့ အကြောင်း အရာလေးတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ...
အလုပ်ရှင် နှစ်သက်သဘောကျပြီး ကြိုးစားတဲ့ဝန်ထမ်းကောင်း ဖြစ်ဖို့
Workplace Way of living Communication
အသက်အရွယ်ရလာတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တစ်ခုကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် အခြားသူဆီမှာ ဝင်ငွေ ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ကိုင်ရတာဟာ အမှန်တရားတစ်ခုပါ။ အလုပ်ကြိုးစားတဲ့သူတွေရှိပေမဲ့ အချို့သောသူတွေဟာ တစ်ခါတလေမှာ အလုပ်ကြိုးစားချင်စိတ်တွေပျောက်ဆုံးနေတတ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစာပိုဒ်လေးမှာ ပါဝင်တဲ့အချက်လေး တွေဟာ အကျိုးရှိစေမယ်လို့ မျှော်လင့်တာကြောင့် ဖော်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ရှင်အများစုကတော့ ဒီအချက် တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကိုတော့ နှစ်သက်ခြင်း မရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ...
ဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ် ပိုမိုဖြစ်လာအောင် ဦးဆောင်ကောင်းသူတွေ လုပ်လေ့ရှိတဲ့အချက်များ
လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ဦးဆောင်သူတစ်ယောက်ဆိုရင် ကိုယ့်လုပ်ငန်း၊ကိုယ်အဖွဲ့အစည်းမှာပါဝင်တဲ့ သူအားလုံး တက်ကြွစွာနဲ့ အလုပ်လုပ် ကိုင်နိုင်ရန် လှုံဆော်တိုက်တွန်းမှုပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအချက်ဟာ လက်ရှိ အောင်မြင်နေတဲ့ ဦးဆောင်သူတိုင်းပြုလုပ်နေတဲ့အချက်တစ်ချက် လည်းဖြစ် ပါတယ်။ ဒါဟာဘာကိုရည်ရွယ်သလဲဆိုရင်တော့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အသစ်တွေကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး လုပ်ရခြင်းမျိုးတွေ ကိုရှောင်ကြဉ်နိုင်ခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ လွှဲအပ်နိုင်ခြင်းစတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို ရရှိစေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဆောင်သူအများစုဟာ ဒီ (၄) ချက်ကို အသုံးပြုပြီး လက်အောက်ဝန်ထမ်းတွေကို အလုပ်လုပ်ချင်စိတ် ပိုမိုဖြစ်လာအောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လေ့ရှိပါတယ်။ ...
How to register on NewChallenges.com.mm
Welcome to NewChallenges! To create better future, let's accept New Challenges. NewChallenges.com.mm is just one click away from you. It's free to register. Here is the way. ...
အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ဘာတွေ လုပ်ဆောင်ကြလဲ
လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာဆိုရင် အများနဲ့ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ရတာကြောင့် အားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ကိုင်နိုင်မှ သာလျှင် ပျော်ရွှင်မှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်နေမှသာ အလုပ်ကို ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်မယ်ဆိုတာအားလုံးနား လည် ထားကြပါတယ်။ အလုပ်ထဲမှာပျော်ရွှင်မှုမရတဲ့သူဟာ အလုပ်ကိုကောင်းမွန်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘဲ သူ့အတွေးမှာ အခြားအကြောင်းအရာကိုပဲ တွေးနေမိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီလို ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေ့ကြုံတွေ့ရ တတ်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ရာထူးနေရာကြီးတဲ့သူတွေအတွက် တာဝန်ဝတ္တရားယူပြီး လုပ်ဆောင်ရတာတွေက ပိုများပါတယ်။ ရာထူးကြီးသူတွေဟာ ကိုယ်ရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့အခြေအနေကို အမြဲတမ်းလေ့လာကြည့်ရှုနေရပါတယ်။ ဘာကြောင့် လဲဆိုရင် ခိုင်မာတဲ့ရပ်တည်မှု တိုင်းဟာ အောက်ခြေပိုင်းမှာပိုပြီးထုထည်ကြီးမားတာကို သူတို့နားလည်ထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ...
Joke of the Day (မန်နေဂျာဆိုတာ)
အရောင်းဝန်ထမ်းတစ်ဦးရယ် ၊ ရုံးဝန်ထမ်းတစ်ဦးရယ် ၊မန်နေဂျာတစ်ယောက်ရယ် နေ့လယ်ထမင်းစားသွားတဲ့လမ်းမှာ ထူးဆန်းတဲ့အိုးလေးတစ်ခုကိုတွေ့တယ်။ အဲ့တာနဲ့ အိုးလေးကို ပွတ်ကြည့်လိုက်တော့ အိုးထဲကနေ ထူးဆန်းပြီး လိုတရဖန်ဆင်းပေးနိုင်တဲ့ နတ်သမီးလေးတစ်ပါး ထွက်လာတယ်။ နတ်သမီးလေးက “အသင်တို့ ၃ ယောက်ကြောင့် ကျိန်စာကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့လို့ အလိုရှိတဲ့ ဆုတစ်ခုဆီ တောင်းပါ ” လို့ ပြောတော့ ……. ...
ပျော်ရွှင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အလုပ်ကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရပါမယ်
Knowledge Way of living
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ လူတိုင်းကို စိတ်ချမ်းသာစေတာကြောင့် လိုချင်ကြတဲ့သူချည်းပါပဲ။အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်မှု ရဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အမြဲလိုလိုပျော်ရွှင်မှု ရအောင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်က အဓိကကျပါတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ အခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်က ပျော်ရွှင်ရဲ့လားလို့ မေးတဲ့အခါ ဘယ်အကြောင်းအရာကို မေးတယ်ဆိုတာ မသေချာပေမဲ့ ကိုယ်ရဲ့အဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းအရာဟာ ဦးနှောက်ထဲ အရင်ရောက်လာတာ ကြောင့် ဒီလိုပါပဲ ဆိုတဲ့အဖြေမျိုးကိုသာပေးလေ့ရှိကြပါတယ်။အမှန်တော့ အခြားသူက ကိုယ်ကိုပျော်ရွှင်ရဲ့လား လို့ မေးတဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်လို့ ပြောဖို့အတွက် ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပြီး လုပ်ဆောင်ရမယ့် အရာတွေကို လည်း သိရှိထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ...
အောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ နေ့စဉ် ကိုယ်ကိုယ်ကို မေးနေရမယ့်မေးခွန်းများ
Knowledge Career Way of living
ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်မေးကြည့်ပါဆိုတဲ့စကားကိုကြားဖူးကြပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမေးခံရပြီဆိုကတည်းက ကိုယ် မှာတစ်ခုခု မှားယွင်းမှုရှိနေပြီဆိုတာကို နားလည်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ်ကိုယ်ကို ပြန်မေးကြည့် ပါဆိုတဲ့စကားဟာ အောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့လက်သုံးစကားတစ်ခုလို့ဆိုရမှာ ဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာ နေ့စဉ်တိုင်းမှာ ဒီ မေးခွန်းကို မေးလေ့ရှိကြပါတယ်။အဲ့လိုမေးပြီး ပြင်ရမယ့်အချက်တွေရှိခဲ့ရင် တစ်ခုချင်းစီလုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ အမှား တွေ နည်းသထက်နည်းလာပြီး အောင်မြင်မှုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ...
အောင်မြင်မှုရရှိလိုသူတွေ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိတဲ့ အချက်များ
ဘဝမှာ လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ လုပ်သင့်တာကိုဦးစားပေးမှသာအဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့ ဘဝ တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက် ရှိအောင်မြင်မှုရနေတဲ့သူတွေကလည်း သူရဲ့ကြိုးစားခဲ့ရမှု၊လုပ် ဆောင်ခဲ့ရမှု၊ ဖြတ်သန်းခဲ့ရမှုတွေကို လမ်းညွှန်ပြောပြပေးနေတာကြောင့် အောင်မြင် ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ရဲ့ စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကို နမူနာထားပြီး ကြိုးစားလို့ရပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို နမူနာထားပြီး ကြိုးစားတဲ့အခါ သူနဲ့ပုံစံတူ ကူးချတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ မတူကွဲပြားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားပြီး အောင် မြင်မှုရနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုရရှိလိုတဲ့သူတွေ အများစု လုပ်ဆောင်လေ့ရှိတာ တွေကတော့ ...
စကားတွေမှာ အမှားနည်းဖို့အတွက် ရှောင်ရမယ့်အကြောင်းအရာများ
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေဟာအတွေ့အကြုံ၊လုပ်သက်တွေများလာတဲ့အခါ ပရော်ဖက်ရှင် နယ်တစ်ယောက်လို အလုပ်ကိုလုပ် ကိုင်နိုင်လာ ကြပါတယ်။ လုပ်ကိုင်ရတဲ့တာဝန်ယူမှုများလာလေ စကားပြောရ တာ များလာလေဖြစ်တာကြောင့် အမှားကင်းစွာပြောနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ စကားများ များပြောရတာကြောင့် အမှားပါလာတတ်တာမို့ ကိုယ်ပြောတဲ့စကားတွေမှာ အမှားနည်းဖို့အတွက် ရှောင်ရမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ...
ကိုယ့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို ဒီလိုလူတွေကို မမျှဝေပါနဲ့
လူတိုင်းမှာ ရည်မှန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်ရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်လည်း ကြိုးစားလေ့ ရှိကြပါတယ်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင် အကောင်းရှိသလို အဆိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ကိုယ်ရည် မှန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ အကောင်းဆုံးပံပိုးကူညီပေးတဲ့သူရှိသလို မရောက်ရှိအောင်လည်း ဟန့်တားတဲ့ သူတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်ကို မရောက်ရှိအောင် ဟန့်တားမယ့်သူတွေကို တော့ ကိုယ်ရည်မှန်းချက်ကို ပြောမပြတာကောင်းပါတယ်။ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကို ကိုယ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကို ထုတ်ဖော်မပြောဖို့ သင့်သလဲဆိုတာကတော့ … ...
NewChallenges Group of Companies isaMyanmar Holding Company founded in 2017 with diversified investments in Recruitment, Digital Advertising, and Travel & Tours Sectors.
• Pop Up Banner
• Pop Up Video
• Standard Banner
No.194/A, Thamain Bayan Street, Kyee Pwar Yae(North), Thingangyun T/S, Yangon, Myanmar.
ALL RIGHTS RESERVED © 2020 NewChallenges